ကျွန်ုပ်၏ ED သည် porn နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း။ (စမ်းသပ်) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
သင်၏ညစ်ညမ်းရုပ်သံကြည့်ရှုခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအကြားဆက်နွယ်မှုတစ်ခုရှိပါကစိတ်အေးအေးထားပါက၊ ရိုးရှင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သည်။ အခမဲ့ပင်။
3 မိနစ်တွင်ဗီဒီယို: အကြှနျုပျ၏ Erectile အလုပ်မဖြစ် Porn စေခဲ့သလား စမ်းသပ်မှုယူပါ! (ဂါယူဆပါသည်အားဖြင့်)
10-munute ကဗီဒီယို: ပြင်းထန်သော Porn-Induced Erectile Dysfunction - သင်ဆရာဝန်ကိုသွားသင့်သလား။ (နော Church ဘုရားကျောင်း)
ယောက်ျားအများစုသည်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများသည်ပိုမိုလေးနက်လာသည်ကိုသတိမပြုမိကြပါ။ ဆင်ခြင်တုံတရားအရသူတို့ (နှင့်သူတို့၏ဆရာဝန်များ) က အကယ်၍ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်လျှင်၎င်းတို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမဟုတ်ဟုယူဆကြသည်။ သူတို့ကမည်သည့်ပြdrugနာမဆိုမူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်း, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်၏ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူကြောင်းယူဆ။ သူမအလုံအလောက်မပူတာ၊ သူတို့ရဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်တာ၊ သူမကိုအရင်ပြန်အမှတ်ရစေခြင်း၊
အများစုကသူတို့အဖြေတွေကိုရှာနေခင်ကွဲပြားခြားနားသောမိတ်ဖက်တွေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကျရှုံးဖို့ရှိသည်။ သူတို့ masturbating ကြသည်မှန်လျှင် မပါဘဲ အများဆုံးညစ်ညမ်းလျင်မြန်စွာစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ဆက်ဆက်နိုင်ပေမယ့်မူးယစ်မဟုတ်သလိုစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်မအပြည့်အဝ (ကသူတို့ရဲ့ပြဿနာအဘို့အကောင့်နိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ် ထောက်ပံ့ ) ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများစတင်တခါပြဿနာဖြစ်သည်။
အကွံဉာဏျ၏ပထမဦးဆုံးနည်းနည်းကောင်းတစ်ဦးဆီးရောဂါပါရဂူကိုတွေ့မြင်နှင့်မည်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမူမမှန်ထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများထွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပြီးတာနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်-သွေးဆောင် ED ကနေညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ခွဲထုတ်ဖို့ဒီရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုစမ်းပါ။
တစ်ကြိမ်တွင်သင်အကြိုက်ဆုံး porn (သို့မဟုတ်ရိုးရိုးကမှတ်မိ) မှ masturbate ။
အခြားတွင်အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်း / ညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူ masturbate ။ အကြောင်း, porn မရှိပြန်လည်သိမ်းဆည်းဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့စိုက်ထူ၏အရည်အသွေးနှင့် (သင်လုပ်နိုင်လျှင်) အထွတ်အထိပ်မှ ယူ. အချိန်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ တစ်ဦးကကျန်းမာလုလင်ကိုအဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက်အပြည့်အဝစိုက်ထူမရရှိစများနှင့်ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ် porn စိတ်ကူးယဉ်စရာမလိုဘဲအော်ဂဇင်မှ masturbating ရှိသင့်.
သငျသညျ #1 အတွက်ခိုင်မာတဲ့ #2 အတွက်စိုက်ထူပေမယ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိပါက, ထို့နောက်သင် porn-သွေးဆောင် ED ရှိသည်။
#2 ခိုင်မာတဲ့နှင့်အစိုင်အခဲဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်အမှန်တကယ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူဒုက္ခရှိပါကပြီးနောက်သင်စိုးရိမ်ပူပန်-သွေးဆောင် ED ရှိသည်။
1 နဲ့2နှစ်ခုလုံးမှာသင်ပြproblemsနာရှိရင်၊ ညစ်ညမ်းတဲ့သွေးဆောင်မှု ED၊ ဒါမှမဟုတ်အော်ဂဲနစ်ပြproblemနာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘယ်အချိန်မှာသံသယရှိကောင်းတစ်ဦးဆီးရောဂါပါရဂူကြည့်ပါ။
အထက်ပါစမ်းသပ်မှုသည် porn-induced ED ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ခွဲခြားရန်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏လက်ဖြင့်စိုးရိမ်စရာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (မင်းတို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြာမြင့်စွာကတည်းကသိခဲ့ကြတာ။ )
porn-သွေးဆောင် ED နှင့်အတူများစွာသောလူတို့သညျပင် porn နှင့်အတူတစ်စိုက်ထူကိုထိန်းသိမ်းရန်မနိုင်ကြောင့်သေချာပေါက်ကိုသင်အော်ဂဲနစ် ED (ဟော်မုန်း, သွေးကြော) နှင့်ပြင်းထန်သော porn-သွေးဆောင် ED အကြားခွဲခြားမကူညီနိုင်ပါ။ သငျသညျဆရာဝန်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ED ထိုကဲ့သို့သောလက်တွေ့စိတ်ကျရောဂါအဖြစ်ပြင်းထန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုကနေပေါ်ပေါက်လျှင်၎င်းသည်လည်းအကဲဖြတ်ရန်လို့မရပါဘူး။
ဒါဟာသင် porn-သွေးဆောင် ED ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်သို့မဟုတ်မရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။ တကယ့်ဖက်နှင့်အတူသာလျှင်အချိန်ထိုမေးခွန်းကိုဖြေဆိုနိုင်ပါ။ (ကြည့်ရှု ကျွန်ုပ်ပုံမှန်ပြန်ရောက်လာသောအခါမည်သို့သိနိုင်သနည်း။).
ကြုံတွေ့နေရ porn နှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှု တစ်ဖက်နှင့်အတူထက်
သင်သာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစိုက်ထူနေကြသည်, ဒါမှမဟုတ်လုံးဝသင်သည်လာမှသာအဖြစ်စိုက်ထူတဲ့အခါ, Ejaculating
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်နှင့်အတူစိုက်ထူသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ fantasize ဖို့လိုအပ်နေ
“ သင်လိုချင်တာမှန်သမျှကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးလုပ်တာကပြtheနာမဟုတ်ဘူး။(မေ, 2015)
သူသည်ငါ့ကိုမေးသော်ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမှာငါ့အညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မချက်ချင်းခုခံကာကွယ်ရင်းနှင့်သူမေးမြန်းခြင်းခံခဲ့ရအဘယ်ကြောင့်ဟုမေးလျှင်, သူကထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီလို့သူကမေးတယ်စံမေးခွန်းတစ်ခုကိုကဆိုသည်။ တချို့အကြောင်းပြချက်ကိုငါကောင်လေးနှင့်အတူအဆင်ပြေသလိုခံစားရတယ်နဲ့ကျွန်မပဲဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုအရာအားလုံးပြောနေတော့တာပဲ။
ငါသူမဆိုနည်းလမ်းများသိတယ်လျှင်သူကူညီရန်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသူ့ကိုမေးခဲ့တယ် ... ။ နှင့်သူ၏တုံ့ပြန်မှုအမြဲငါနှင့်အတူမှီဝဲခဲ့သည်။ သူက“ မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြန့်ချိဖို့လိုတယ်၊ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကဖျော်ဖြေရေးလိုတယ်ထင်လား” ဟုပြောခဲ့သည်။ အဲဒီအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ခါမှမစဉ်းစားဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့်ခေတ္တနားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာအများစုဟာကျွန်မရဲ့အဖြေပဲ။
ထို့နောက်သူက“ ကျနော့်ရဲ့ပညာရှင်အမြင်ကသင်နဲ့လာမည့်ချိန်းဆိုမှုကြားမှာသင်လိုချင်တာအားလုံးကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသင့်တယ်ဆိုတာပဲ။ ငါသာသင့်ကိုအခြေအနေတစ်ခုပေးပါ။ အဲဒါကိုဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားပါ။ NO visualization သို့မဟုတ်ဆွ။ ၎င်းသည်သုံးဆ X အမာခံလားသို့မဟုတ်မေးလ်တွင်ပါသောဗစ်တိုးရီးယား၏လျှို့ဝှက်ကတ်တလောက်လား၊ သင်၏မျက်လုံးများကိုပိတ်။ မည်သည့်အရာ၊ သင့်မှာယားယံနေရင်သင်ကခြစ်ရာရိုးရှင်းပါတယ်။ အခြားသူများယားယံနေသည့်ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်မလိုအပ်ပါ။
ဒါဟာသူကြီးဘယ်လိုညာဘက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကမလုပ်ပေးနိုင်တော့ပါ! ငါမကြာမီငါ၏အတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုငါ့စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာထဲမှာညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်သို့ကျဆင်းလာမှာကြည့်ရှုရန်ဆင်ခြေခန့်အခြားလမ်းထက်ပိုမိုခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားတိုင်းအချိန်ငါအလိုဆန္ဒနှင့်အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးအခြို့သောခြင်း simulation များအတွက် Race မယ်လို့ဆုံးရှုံးဖို့စတင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီဆွေးနွေးချက်အများအပြားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ကတည်းကငါရုန်းကန်ဆက်လက်ပါပြီ။ အဘယ်သို့ငါလုံးဝရှယ်ယာလုပ်နိုင်ကြောင်း ကျနော်တို့ fap အခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းကြသည်မဟုတ်။ ငါဟာအခွံမာသီးရဖို့လိုတယ်၊ 'ဒါဟာသဘာဝကျတယ်' လို့တွေးခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါနှစ်ခုလုံးကမှားနေတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်အခွံမာသီးရရန်မလိုအပ်ပါဘူး, ငါပြုလျှင်လျှင်ငါမဆို porn မပါဘဲအလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ငါခက်ခဲတဲ့ mode ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်မည်သူ့ကိုမျှမတိုက်တွန်းလိုပါ။ သို့သော်သင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါကသင့်ကွန်ပျူတာကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပိတ်ပြီးမျက်လုံးဖွင့်ပါ။ သင်အကြိုက်ဆုံးစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုမစဉ်းစားပါနှင့်။ မကြာခင်မှာသင်ဟာစိတ်ကူးယဉ်ဖို့မထိန်းချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ 'လိုအပ်ချက်' ကိုတကယ်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဖိုရမ်ပို့စ်ကနေ (စက်တင်ဘာလ, 2012)
yeah, ငါသည်ဤအကြောင်းကိုငါ့အဆီးရောဂါပါရဂူ / w ဟောပြောချက်ခဲ့ကြ ဘီစီငါ lowish testosterone ဟော်မုန်းအဘို့အစမ်းသပ်ခံခဲ့ရသည်။ သူက ED နဲ့ဒီအကြောင်းပြောဖို့လူငယ်တွေပိုများလာတယ်လို့ပြောခဲ့တယ် သူသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း ED သူ့လူနာအကြောင်းကို 50% ဖြစ်ကောင်း 35 ထက်အသက်ငယ်ခဲ့ကြသည်ခန့်မှန်း။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကမ္ဘာကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့အဆိပ်အတောက်များတိုးများလာခြင်းမှကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်စေ၊ (ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိ၍ ဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည်) ဖြစ်စေ (ဖြစ်နိုင်သည်) ဤညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။ ဒီလူနာအများစုမှာပုံမှန် T အဆင့်ထက်နိမ့်ကျပေမယ့် ED နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးအနက်ညည်းညူသင့်တယ်ဆိုတာမလုံလောက်သေးပါဘူး။